मुटु दरो गरेर हेर्नुहोस : लुक्ला विमान दुर्घटनामा तस्बिरहरु ! « Onlinetvnepal.com
मुटु दरो गरेर हेर्नुहोस : लुक्ला विमान दुर्घटनामा तस्बिरहरु !
Published : 15 April, 2019 11:00 am
सोलुखुम्बुको लुक्ला एयरपोर्टमा हवाई जहाज र हेलिकोप्टर ठोक्किँदा मृत्यु हुनेहरुको संख्या ४ पुगेको छ । दुर्घटनामा घाईते असई रुद्रबहादुर श्रेष्ठको पनि मृत्यु भएको छ । श्रेष्ठको काठमाडौं लैजाने क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
यसअघि समिट एयरका कोपाइलट सुदीप ढुंगाना र पर्यटक प्रहरी असई रामबहादुर खड्काको मृत्यु भइसकेको थियो । मृतक एक जनाको नाम भने खुलेको छैन । दुर्घटनामा समिट एयरका क्याप्टेन आरबी रोकाया, मनाङ एयरको क्याप्टेन घाइते छन् । उनीहरुलाई उपचारका लागि काठमाडौं लगिएको छ । क्याप्टेन रोकायाको अवस्था गम्भीर छ ।